PSJTV | के हाे भाइरल हेपाटाइटिस? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण?
के हाे भाइरल हेपाटाइटिस? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण?
शनिबार, ११ साउन २०७६ पिएसजे न्युज
तपाईंमा भाइरल हेपाटाइटिसको संक्रमण त छैन? एक सामान्य परीक्षणले आफनो शरीरमा यो भाइरसको उपस्थितिबारे यकिन हुन्छ। धेरै नेपाली आफूलाई भाइरल हेपाटाइटिस छ वा छैन भन्ने जानकार छैनन्।
भाइरल हेपाटाइटिस नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियामा सन् २०३० सम्म मुख्य जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखिने आंकलन गरिएको छ।
यो समस्याबाट २ वर्षे शिशुदेखि ८५ वर्षे वृद्धसम्म पीडित रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कलेजो रोग विशेषज्ञ डा.रविन हमाल बताउँछन्। सन् २०१५ मा विश्वभर करिब ३२ करोड ५० लाख मानिस दीर्घकालिन हेपाटाइटिस पीडित रहेका छन्।
यी हुन् प्रारम्भिक लक्षण
मांसपेशी र जोर्नी दुख्नु
उच्च ज्वरो आउनु
आँखा र छाला पहेँलो हुनु
जन्डिसको लक्षण देखिनु आदि।
कुनै पनि प्रकारले कलेजो सुन्निने समस्या हेपाटाइटिस हो। यो स्थिति आफैँमा सीमित हुन सक्छ वा फाइब्रोसिस, सिरोसिस वा कलेजोको क्यान्स पनि हुनसक्छ। हेपाटाइटिस बी को भाइरसले एड्सको भाइरसले भन्दा सय गुणा बढी संक्रमण गर्ने लक्षण राख्छ।
एड्सले एक वर्षमा ज्यान गुमाउने बराबर मानिस हेपाटाइटिस बी ले एक दिनमा मर्ने गरेका अध्ययनले देखाएको छ। खोप लगाएर हेपाटाइटिसबाट बी बाट बच्न सकिन्छ। तर, एड्सको हालसम्म जनस्तरमा उपलव्ध खोप छैन। यो जानकारी आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
धनगढी : कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीयले उपभोग गरिरहेको भूभागमा भारतीय अतिक्रमण नरोकिएपछि सीमा विवाद जटिल बनेको छ। नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले तीन वर्ष पहिलेदेखि ती जिल्लाको सीमा विवाद समाधान गर्न ...
सशस्त्र गतिविधिमा लाग्दालाग्दै विप्लव नेकपाले आफ्ना कमजोरी आफैंले औंल्याएको छ। क्रान्तिको चापभित्र केही कमजोरी र समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि अलि बढी नै आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याउने खालका समस्याहरू देखापरेको उसले महसुस ...
चीनबाट विश्वव्यापी भएको निमोनिया उत्पन्न गराउने नोवल कोरोना भाइरस मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेको २ देखि १० दिनभित्र लक्षण देखिन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मुख्यालयका अनुसार यो ...